Budata Copy maka Windows
Free Budata maka Windows (47.31 MB)
Detuo bụ ọrụ nchekwa igwe ojii ọhụrụ dị ka Dropbox, UbuntuOne na OneDrive. Otu nime uru dị mkpa nke Copy, nke bụ ọrụ nchekwa igwe ojii siri ike nke na-enye nchekwa dị elu na nhọrọ nkekọrịta, bụ na enwere ike iji ya na Windows, Mac, Linux, Android, iOS na Windows Phone nyiwe.
Ị nwere ike ịmekọrịta faịlụ na kọmputa gị na ngwaọrụ mkpanaaka ndị ọzọ site na iji Copy. Nụzọ dị otú a, ị nwere ike ịnweta sodyas gị mgbe ọ bụla ịchọrọ. Site na njirimara dị elu dị ka nyocha na nkesa nchekwa, ọrụ ahụ na-ahụ na faịlụ ndị ọrụ ka dị nchebe. Ewezuga nke a, ọrụ ahụ, nke na-eji ezoro ezo okpukpu abụọ na usoro nchekwa dị elu, na-ekpughe mkpa ndị ọrụ ya na-etinye na faịlụ ha. Ịkekọrịta na Detuo, ebe ị nwere ike kesaa nnukwu faịlụ na-enweghị oke ọ bụla, naanị ndị ị na-ekwe ka ga-eme ya.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ nchekwa igwe ojii ọzọ iji kwado faịlụ gị ma chekwaa ha, ana m akwado ka ị nwaa Detuo. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ibudata mmemme ahụ wee debanye aha, ị ga-enweta 15 GB nke nchekwa igwe ojii nefu.
Nha faịlụ: 47.31 MB
Mmepụta: Barracuda Networks
Microsoft Okwu bụ ngwa Office a na-ejikarị ma na-abịa na interface akwadoro maka ekwentị na...
Samsung Flow bụ mmemme pụrụ iche maka Windows 10 Ndị ọrụ PC na -enye ahụmịhe njikọ enweghị njikọ na...
Ngwa OneNote bụ otu ngwa anaghị akwụ ụgwọ ebe ndị ọrụ Windows 8 na 8.1 nwere ike ịrụ ọrụ ndetu...
Dashlane bụ onye njikwa e-commerce zuru ezu ezubere iji chekwaa gị oge mgbe ị na-eme ọtụtụ akaụntụ...
GitMind bụ nefu, maapụ uche na mmemme ịtụgharị uche dị maka PC na ngwaọrụ mkpanaka. Mmemme nkewa...
Adobe Reader bụ onye na -ekiri PDF kacha mma yana ụdị pro yana nefu. Ọ bụ mmemme Windows kacha mma...
Speedify bụ otu nime nhọrọ kachasị mma maka ndị ọrụ Windows na-achọ mmemme VPN nchekwa, ngwa ngwa...
Polaris Office bụ mmemme ọfịs efu iji lelee ma dezie Microsoft Office gị, PDF, TXT na akwụkwọ ndị...
Ị nwere ike tọghata faịlụ Okwu ka ọ bụrụ PDF site na ngwaọrụ gam akporo gị site na iji Okwu ka ọ...
Noge ndị a na-ebufe ibu bụ ihe a ma ama, Tonido bụ otu nime mmemme nke teknụzụ igwe ojii nke toro...
Ngwa Icecream PDF Editor na-enye nhọrọ iji dezie na jikwaa faịlụ PDF gị na kọmputa sistemụ arụmọrụ...
Xodo PDF bụ ngwa nlele PDF zuru oke nke ị nwere ike ibudata ma jiri nefu na mbadamba Windows 8 na...
Ngwa swiiti PDF, nke ị nwere ike iji na ngwaọrụ sistemụ arụmọrụ Windows gị, na-enye gị ohere ijikwa...
Soda PDF abụghị naanị onye na-agụ PDF ma ọ bụ onye na-ekiri PDF, ọ bụ ihe ngwọta ọkachamara dị ka...
Ọ bụ ụdị TeamViewer, otu nime ndị njikwa desktọpụ dịpụrụ adịpụ nke na-aga nke ọma, nke emepụtara...
Adobe Creative Cloud bụ mkpokọta mmemme desktọpụ Adobe, ngwa mkpanaka, na ọrụ. Ị nwere ike ijikwa...
Site na ngwa LonelyScreen, ị nwere ike enyo ngwaọrụ iOS gị na kọmputa sistemụ arụmọrụ Windows gị. Ọ...
Ihe ndetu Nimbus bụ ngwa na-edobe ndetu nwere ọtụtụ ọrụ nke ị nwere ike iji obi ike kwado ndị ọrụ...
Okwuntughe iCloud bụ mgbakwunye gọọmentị (mgbakwunye) maka ụdị Windows na Mac nke Google Chrome...
CloudMe bụ ngwa aka emebere maka ịkwado faịlụ gị na nchekwa igwe ojii echekwara. Ihe omume a...
OneDrive bụ ụdị Windows nke SkyDrive emegharịrị, ọrụ nchekwa faịlụ igwe ojii na-ewu ewu. Nihi...
Mara: A tọhapụrụ Microsoft Excel maka Windows 10 dị ka ụdị nlele ma ị nwere ike budata ya naanị ma...
Mara: A tọhapụrụ Microsoft PowerPoint maka Windows 10 dị ka ụdị nhụchalụ ma ị nwere ike budata ya...
Foxit Mobile PDF bụ ngwa nlele pdf nefu, obere na ngwa ngwa dabara na mbadamba ihe Windows 8 na PC...
Droplr na-adọta uche dị ka mmemme nkesa faịlụ emepụtara maka ojiji na kọmputa nwere sistemụ arụmọrụ...
Igwe ojii dị na mpaghara bụ akụrụngwa bara uru emebere iji weta data echekwara na kọmpụta ọ bụla...
Cubby bụ mmemme mmekọrịta ọrụ nchekwa faịlụ igwe ojii na-enye gị ohere bulite faịlụ gị na sava igwe...
Quip bụ mmemme dị mfe iji na ngwa ngwa nkesa, ndezi na ikiri mmemme emebere maka ndị otu ọrụ...
Yunio na-enye ndị ọrụ ohere ịkwado faịlụ ha na nchekwa faịlụ igwe ojii nke ha, kesaa faịlụ ha na...